:Bọchị: Nọvemba 27, 2019
Bursa ga-aga n’ihu n’uche ndị obodo na nke mba
Bursa ga-aga n'ihu na-eduzi ebumnuche obodo na nke mba; Emere Nzukọ Mgbakọ November Bursa. İsmail Kuş, onye isi oche nke Board of Directors of BTSO [More ...]
Gịnị mere na agbasaghị ụkpụrụ nduzi nke Samsun Sivas?
Gịnị mere na agbasaghị ụkpụrụ nduzi nke Samsun Sivas? ; 'Iwu maka usoro na mmejuputa atumatu ka agaeezie na ụzọ ụgbọ okporo ígwè' nke batara na 2013 'n'okporo ụzọ jiri oge ụgbọ ala kwa ụbọchị karịa nke 30 puku ugbo ala' [More ...]
Iji bulie ike dị ọcha na njigide ụwa, ọtụtụ atụmatụ na-apụta nke ga-akpali teknụzụ. N'ike mmụọ site na iji nka na egbe egbe, nnukwu ụgbọ oloko a bu n'obi ijikọ kọntinenti. Airlinesgbọ elu, ụwa kachasị [More ...]
Emere akwụkwọ EIA maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ toụ ahụ dị na Airport City nke a ga-eguzobe n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul nke etinyere na Arnavutköy. Puku puku 750 ga-agba IGNUMX afọ n'afọ. Njikwa ọdụ ụgbọ elu IGA, Istanbul [More ...]
AKAKỌ TRAVEL NA AKPTER Maps RUPUTA Na Maapụ Google; İZDENİZ A.Ş jikọtara na İzmir Obodo ukwu. na-aga n’ihu iji teknụzụ dijitalụ na-arụ ọrụ nke ndị njem. N'ihi mkparịta ụka ya na Google [More ...]
Onye minista ụgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan; 52 anabatala ihe karịrị otu nde njem ruo ugbu a. Onye ozi Turhan, 98 ekele maka njem njem ejikọtara na ọrụ nke YHT [More ...]
Ekwesịrị imepụta obi anụrị Ankara Samsun YHT Line ozugbo enwere ike; Onye osote CHP Samsun bụ Kemal Zeybek kwuru, “A ga-emecha akara Ankara-Samsun na 2019, amabeghị mgbe a ga-arụcha ahịrị a. Oke Ankara-Samsun [More ...]
Mgwọ Marmaray dịgasị iche iche maka ọnụ ọgụgụ ụgbọ njem eleta; Amụma ọnụahịa nke Marmaray, nke malitere ije na ngụkọta 43 nkwụsị n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya, dịgasị iche dabere na ọnụ ọgụgụ nkwụsị. 5.5 5 na ngụkọta afọ [More ...]
Ekol Logistics, nke gara n'ihu na uto ya na mpaghara ụwa, abanyela aka na Italian UBV Group na nkwado ogologo oge. Ekol bu n’ibulite ogo oru ya site n’inwekwu ngalaba ya na nkesa ya. [More ...]
Onyinye isi obodo Istanbul International International Excellence; Turkey si ibu oru ngo-aga n'ihu na-abịa mba enọ. Ikpeazụ ma ọ bụghị n ’ụzọ ụgbọ oloko Istanbul dị na AEC Excellence Awards 2019 (AEC Excellence), otu n’ime nzukọ ndị kachasị ewu ewu n’ụwa. [More ...]
Turkey na-Ịba Importance of Context of ájị na Road Project na China; Ankara si Central korido igba chọrọ site Turkey si dị mkpa na ahia network inyịme si Europe na China ga-akpa ihe na burukwa na Netherlands bụla echebe Conference ụzọ [More ...]